Home Wararka Gudaha Masuuliyiin ka tirsan dawlada Puntland oo xariga ka jaray ceel biyood cusub
Masuuliyiin ka tirsan dawlada Puntland oo xariga ka jaray ceel biyood cusub
Masuuliyiin ka tirsan dawlada Puntland oo xariga ka jaray ceel biyood cusub oo laga hirgeliyay deegaanka Yaka-Yaka ee degmada Qardho.
Waxaa si rasmi ah xariga looga jaray ceel-biyood cusub oo ku shaqaynaya Sollarka cadceeda laga dhaliyo, dadka deegaankana ay baahi-wayn u qabeen, kaas oo dawlada Puntland ay ka hirgelisay deegaanka Yaka-Yaka ee degmada Qardho.
Ceel-biyoodkaan ayaa daboolaya baahida biyaha ee mudada dheer ay qabeen dadka deegaanka oo reer guuraa tiro-badan ay ku xiran-yihiin, hadana ay usoo guureen dad soo guurto ah, oo saamayn adag ay ku yeelatay abaarta adag ee dalka ka jirta.
Qorshaha wakaalada biyaha iyo wasaarada tamarta, biyaha iyo macdanta ayaa ah in la cirib-tiro guud ahaan baahida biyo la’aaneed ee ka jirta gobolada Puntland, waxaana xarig jarkaan goob-joog ka ahaa Maamulka degmada Qardho, kan Gobolka Karkaar, Bulshada deegaanka, Agaasimaha wakaalada biyaha Puntland, Wasiirka Wasaarada tamarta. macdanta iyo biyaha Puntland, xildhibaano ka tirsan dawlada Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Masuuliyiin kale.
Previous article(Cumar Filish) ayaa maanta dib ugu soo noqday Dalka, kadib safar shaqo oo maalmihii la soo dhaafay
Next articleMadaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo marwada koobaad Jill Biden ayaa si degdeg ah looga saaray
Canan Kaftancioglu: Waa tuma haweeneyda laf dhuun gashay ku noqotay Erdogan?